Sei Kuenda By Train Is zvakatipoteredza Friendly | Save A Train
musha > Chitima Kufamba > Sei Kuenda By Train Is zvakatipoteredza Friendly
Rail senga ndiyo mhoteredzo-ushamwari nzira kufamba. Inokudza mugumisiro gasi choutsi por kiromita pamusoro njanji senga iri 80% zvishoma pane motokari. Mune dzimwe nyika, zvishoma pane 3% pakufamba zvose gasi choutsi vanobva nezvitima. The chete nzira dzakawanda zvakatipoteredza noushamwari pane nezvitima vari kufamba uye kuchovha. There Vakawanda zvikonzero kusarudza kufamba nechitima uri zvakatipoteredza ushamwari uye tinoda kugoverana izvi nemi!
A chaiwo chitima mutsetse anogona kutakura 50,000 vanhu paawa. Enzanisa izvi aine Freeway mukoto, izvo zvinogona kufamba chete 2,500 vanhu paawa.
New anosangana yekare #GWR #greatwesternrailway #newtrains #hst
A mumhanyi vakagoverana ne Nigel C Williamson (@ nigelw68) pamusoro Jan 22, 2018 pa 3:24am PST
Kana achisiyanisa gwenya senga pamwe njanji, kuti zvekunze mari, ruzha, kusvibiswa kwemhepo, tsaona, uye kwezvivako kudzikira, uye kuzara vari kure kudzika pasi nezvitima pane kushandisa motokari muchihwande.
ruzha kusviba – Sei kusarudza kufamba nechitima iri zvakatipoteredza ushamwari
kusvibisa ruzha iri kukanganiswa mugumisiro ruzha vose vanhu nemhuka. Zviri zvakonzerwa murombo Urban Design. Matambudziko kubva ruzha kusvibiswa musi shure kuRoma yekare! nhasi, ruzha kusvibiswa kubva motokari kunogona kukuvadza vanhu vaMwari mupfungwa mamiriro. Zviratidzo zvinosanganisira BP, soro-kushushikana mumatunhu, tinnitus, hope chainetsa, uye zvimwe zvinokonzerwa.
pari zvino, pane matanho kushomeka matambudziko panzira ruzha. zviyero zvinosanganisira ruzha ematongerwo, vakaomerwa motokari aimhanya, kuchinja mugwagwa unaku, uyewo motokari chidhiraivho kuti dzinoita wakatsetseka motokari aibuda. Izvi zvinoreva kuti motokari iri motokari kudzora mamiriro vanofanira kushandisa mabhureki dzavo uye kumhanyisa zvishoma.
The chitima iri zvakatipoteredza ushamwari uye kuti vachishoropodza. India ari kuona rokutengesa motokari kuwedzera akatasva hwaro gore negore. China akafanotaurwa kuti 300 miriyoni motokari munzira 2030. Aviation uye chikepe kufamba vari kuwedzera munyika yose CO2 choutsi. Zvinoita sokuti ose modes pakufamba, zvitima chete izvo zviri kuchengeta kubuda kwakaderera uye inoshanda mune ramangwana.
motokari Electric uye Mbeu dzakauchikwa vari pachena nani zvakatipoteredza kupfuura motokari chinyakare, asi dambudziko nhasi kuti motokari idzi yakawandisa kuti atengeswe pamwero kuti zvichaita kuenzanisa kunze nemigumisiro yakaipa mota.
Diesel nezvitima uye dzemagetsi nezvitima
Pane musiyano pakati Diesel nezvitima zvemagetsi nezvitima. Electric nezvitima emit 20-35% zvishoma kabhoni pane imwe Diesel chitima. A chitima iri zvakatipoteredza ushamwari kunyanya Electric nezvitima kuti dzinofambiswa ne renewable simba uye ubayire kabhoni-vakasununguka nzendo. choutsi kubva nezvitima mu Europe kuchaderedza pedyo mberi 50% kubudikidza 2030. Izvi nhamba yakakura kubva nezvitima pamusana 8.5% zvose kufamba kwebasa.
#muenzaniso #environment #carpolution
A mumhanyi vakagoverana ne Dave Wheeler (@davewheelerstudio) pamusoro Jun 23, 2016 pa 3:18pm PST
Zvitima kana ndege – nei kusarudza kufamba nechitima iri zvakatipoteredza ushamwari
Zvimwe zvinhu zvinofadza kana kuenzanisa nezvitima kuti ndege ndiko kuti ndege vanofanira kushandisa incredible yakawanda huni zvose yasimuka uye kumhara. wo, kana vanhu kufamba nendege, avanotarisira kusvika yendege nemotokari. Izvi zvinowedzera CO2 choutsi cherwendo. Izvi zvinoita kutora chinhu intercity chitima munhu asina-brainer zvakatipoteredza.
Pane zvimwe zvichangobva kuitika, kunyanya vanhu parwendo zvebhizimisi uyo anoudzwa nemutariri pakufamba vaishandira kabhoni kwechirwere ndege dzavo. wo, tisingabatanidzi zvakatipoteredza, zvakaoma chaizvo kusvika nzvimbo guta nemotokari, nepo, kana uri muchitima, une zvakananga kuwana yemo nzvimbo. ichi, kakawanda, kunorevawo kuti zvikuru nokukurumidza kufamba nechitima pane dzimwe nzira ipi.
In mhedziso, chitima iri zvakatipoteredza ushamwari uye zvikuru kwezvakatipoteredza-ushamwari nzira kufamba uye anopa kurerukirwa kuti vanhu vaifamba vose zvebhizimisi uye mufaro. Kuwedzera motokari mumugwagwa zvinoreva kuti kuzara uye kusvibiswa kwemhepo dziri kuwedzera uye nezvitima ndiwo chokufambisa mhinduro kudzivirira zvakatipoteredza.
Munotsvaka kutenga chitima matikiti pasina Réservation yechikoro? Enda ku www.saveatrain.com kuti kuwana yakachipa pashiri chitima prices.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kuchinja ja kuti haulla kana nayo uye mimwe mitauro.
#zvemagetsi mhepo mvura nenzvimbo Train Travel famba